Fumana le pakethi epheleleyo yeziphumo zokubhaliweyo kwi-90% isaphulelo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Namhlanje kufuneka sinakho Zonke iintlobo zeziphumo zombhalo zinokuba nencwadi elungileyo kwaye ke ungalahli naluphi na uhlobo lomsebenzi esiwubuzwa ngumthengi. Kule nto sineepakethe zeziphumo zombhalo kwiFotohop njengaleyo ibonelelwa yiwebhusayithi ngesaphulelo sama-90%.
Ngokukodwa siza kuba sithetha ngokuncitshiswa Ixabiso ukusuka kwi-195 ukuya kwi-19 yeedola, Ke ukuba ufuna ukuba neziphumo ezikumgangatho ophezulu wokubhaliweyo, ngekhe ibe yinto embi ukuba uyema ngokubazi kufutshane. Inyani yile yokuba kubandakanya iindidi ezahlukeneyo zemixholo kunye noyilo ukuze sibe nelayibrari yokuya kulo naluphi na uhlobo lomthengi. Ngoko ke musa ukulibazisa ukudlula uze udibane nabo. Kwaye ukuba uyafuna thatha ithuba kwesi-90% sesaphulelo kufuneka ucofe nje apha kwaye wenze ukuthengwa.
1 Umxholo wepakethi yeziphumo zombhalo zeFotohop
2 Umphumo wokuqala wokusebenza: I-3D yale mihla «Glamour»
3 Elinye iqela leziphumo: umkhenkce
4 Imnandi kwi-3D
5 I-3D Wood: kwaye ungaphoswa ziinkuni ezikule phakethe
6 Izitayile zeMetal Photoshop
7 Uhlobo lwevintage: xa indala isesefashini
8 Iziphumo ezivuthayo zombhalo: xa isicatshulwa sikhanya ngaphezulu kunabanye
9 Iziphumo zombhalo zeAdobe Photoshop: IVolcanic
Umxholo wepakethi yeziphumo zombhalo zeFotohop
Njengoko besesitshilo, uya kuba nento enkulu Ingqokelela yazo zonke iintlobo zeziphumo zesicatshulwa yeFotohop. Singavavanya wonke umxholo oza kuwufumana ngale ndlela:
Iziphumo zombhalo wePremiyamu zeFotohop.
Baye kakhulu Kulula ukwenza ngokwezifiso enkosi kumaleya awo ahlukeneyo anokuvumela ukuba uwahlele ngendlela othanda ngayo.
Zilungelelaniswe ngokugqibeleleyo kulo naluphi na uhlobo lwefonti okanye imilo, ke unokuzidibanisa nomsebenzi wakho ngaphandle kobunzima.
Enye yezona zinto zibalaseleyo: unako Guqula isicatshulwa esingacacanga sibe yi-3D nezinye zezona ziphumo zibalaseleyo kule pakethi yeAdobe Photoshop.
Ezinye iinkcukacha ekufuneka zithathelwe ingqalelo ukuze zisebenzise ngendlela esifuna ngayo kwaye oko kuya kusinika isixa esikhulu sezixhobo kwiziphumo zombhalo zeAdobe Photoshop. Ngaba zezi:
Ngexesha lokuthenga ungasele unesandla zonke iziphumo zombhalo oza kuzisebenzisa kwinkqubo oyithandayo efana neAdobe Photoshop.
Zonke iifayile zithunyelwa kwifomathi yePSD kwaye ifuna i-Photoshop CS5 okanye kamva.
Zonke iziphumo zombhalo zinokusetyenziselwa zombini ishishini kunye nenjongo yobuqu. Ngamanye amagama, unayo yonke inkululeko emhlabeni yokwenza nantoni na oyifunayo nabo; njengoluhlu lweefoto ezinayo ikhutshelwe eluntwini iThala leencwadi laseNew York.
Umphumo wokuqala wokusebenza: I-3D yale mihla «Glamour»
Ibhetshi yokuqala yeziphumo zokubhaliweyo zeAdobe Photoshop yi "3D Modern Smart object" ezayo ukubuyisela isicatshulwa esicacileyo nge-3D enye ngobukho obothusayo. Oko kukuthi, iya kuguqula isicatshulwa sombala ocacileyo sibe yi-3D ngombala omkhulu kunye nokukhanya. Uhlobo lwesiphumo sesicatshulwa esifanelekileyo kulawo makhadi okanye iipowusta zokuphela konyaka okanye "ezithandekayo" ezininzi.
Esi siphumo sombhalo sikhatshwa ngu imvelaphi emine emile okwe rhomboid ukunika ubukho ngakumbi kweso sibhalo sinxiba "kubukhazikhazi" kwaye sibeka ukukhanya okukhulu. Kukho uyilo olwahlukileyo kunye nemibala eyahlukileyo eyahlukileyo ezandleni zethu. I-Sparkles zibandakanyiwe ukunika "ubukhazikhazi" ngakumbi kwisicatshulwa esisifunayo kwitikiti leqela elikhethekileyo okanye ukubhiyozela ukuphela konyaka.
Elinye iqela leziphumo: umkhenkce
Omnye Uthotho lweqhwa Zingasetyenziselwa imixholo yeKrisimesi okanye ukubonakalisa isiselo esihlaziyayo okanye i-ayisi khrim ehlotyeni. Sinezinto ezininzi ezahlukileyo zomkhenkce ezandleni zethu kuxhomekeke kwiimfuno zethu, ngenxa yoko awuyi kuphoswa nayintoni na le batch yeziphumo.
Iindidi ezintathu zobungakanani beempembelelo zomkhenkce.
Iibhulashi ezi-8 zekhephu ukwenza indalo yethu ngokobuqu
Izimbo ezi-2 zempembelelo yekhephu "ukupeyinta" kwisicatshulwa esihleliyo.
3 umsi iibrashi ukunika olo "mhlaba" ubambe kokusingqongileyo kwaye unike ubunyani ngakumbi ekhadini okanye kwipowusta eyenzelwe umthengi.
Isisombululo esikumgangatho ophezulu: nokuba sandise iziphumo sinokubona ukuba zingalahli nasiphi na isisombululo kunye nobukhali.
Maleko ngaphaya ukusebenzisa iziphumo zombhalo naphina apho sifuna khona kwaye zidityaniswe ngokugqibeleleyo kulwakhiwo lomsebenzi wethu.
Iziphumo ezahlukileyo zokubhaliweyo komkhenkce ukuze sikwazi ukuwaguqula ngokuchanekileyo amabinzana esiwafunayo.
Iya kuba ngonqakrazo apho siyilo okanye enye into esiyithandayo kunye nokukhetha kwangaphambili.
Banobuchule kakhulu kwaye baya kubonelela ngekhathalogu yakho nge ezahlukeneyo zetekisi Ungayifaka kuzo zonke iintlobo zemixholo evela kovuyo olunxulumene neKrisimesi kwintengiso yeziselo ezihlaziyayo. Ngobuchule bokuyila kunye nokuqonda malunga noyilo abanokubandakanywa kulo naluphi na upapasho, intengiso okanye iiflaya.
Eli qhekeza leziphumo zombhalo likwabandakanya kuthotho lwe-12 kwi-3D ngokungafaniyo nezo zangaphambili, inomdla kwinto ethile yeklasikhi, yolutsha kunye neyomeleleyo, nangona ngaphandle kokungabikho kwempembelelo yoyilo kulowo nalowo kubo. Kwaye ukuba ezi ziphumo zesicatshulwa zibalasele kuyilo ukuze sibe ne-3D ethi ikhuphe isicatshulwa esithile.
Singa inxulumene nento ethile yaseMelika ngaphandle kokulibala ukuba ubambe iklasikhi okanye iidiliya ezongeza iintlobo ezahlukeneyo kuseto. Njengabanye, unokuguqula isicatshulwa esicacileyo sibe yi-3D enye enobukho obubonakalayo kwaye obuzivelelayo.
Kule iqashiso sifikelele kwiziphumo ezibhaliweyo ezili-12 Iyonke ibizwa ngokuba yi "Gowasome." Khange sifumane mabrashi okanye izitayile zempembelelo kwitekisi esiza kuyenza, kodwa nganye kuzo yenzelwe kakuhle kudidi lwayo.
Sigxininisa enye ye «Isikolo» yezo zithunzi zangaphakathi nangaphandle ukunika isicatshulwa uyilo olukhethekileyo kwaye luyi "American" kakhulu.
I-3D Wood: kwaye ungaphoswa ziinkuni ezikule phakethe
Kwaye kule pakethi isimbo seenkuni asinakuphoswa ukunika isicatshulwa isiphumo sendalo. Iziphumo zombhalo ezikumgangatho ophezulu kwi-300 DPI ke ubukhali babo bubalasele kwaye nokuba siyabandisa ngekhe kuphulukane nesisombululo.
Este Ininzi yeenkuni ze-3D ngeenjongo zokubhaliweyo ikakhulu zibonakaliswa zezi zizathu zilandelayo:
Iindidi ezi-6 zoburhabaxa: INutdark, iCherrywood, i-Oak, iAlder, iAppletree kunye neOakwood.
Olunye uhlobo loburhabaxa lukwisisombululo seepikseli ezingama-2000 x 1600 kunye ne-300 DPI. Ke unokwenza nabo into oyifunayo.
Izikrufu zomthi- Uthotho lweempawu ezilinganisa ngokugqibeleleyo izikrufu zomthi. Ke ukwazi ukuba ungazifumana njani ngokufanelekileyo kunokunika isiphumo esimangalisayo kunye nenhle kuyo yonke.
Kulula ukuyisebenzisa: enkosi kwizenzo onokuziguqula zonke iintlobo zeemilo zibe zezona ziqwenga zomthi zobuhle obukhulu.
Izimbo ezi-3 ze-3D: ke unokuyinika umthunzi ofuna ukuwunika ubuninzi bezicatshulwa ezisetyenzisiweyo.
Izitayile ezili-18 zizonke zomthi we-3D: izitayile zinokusetyenziswa kokubhaliweyo kunye neemilo zejiyometri.
Enye yezona ndawo zibalaseleyo zepakethe yepremiyamu yeziphumo zombhalo zeFotohop. Ukuba uyafuna unike umnxeba okhethekileyo kumthi kwiwebhusayithi okanye emsebenzini womthengi, le bhetshi ingaphezulu nje ngokwaneleyo njengesixhobo sokuqala.
Izitayile zeMetal Photoshop
Iziphumo zesinyithi azinakuphoswa kule pakethi yeziphumo zombhalo, ezihlala zamkelwe ngokubanzi linani elikhulu labayili. Iimpawu ezifana negolide, isilivere, ubhedu, chwetheza "grunge" okanye ipeyinti zezinye zezitayile eziqulathwe yile pakethe yeziphumo zombhalo.
Akukho kunqongophala kwesinyithi seprimiyamu bakhupha ezo nkcukacha ukushiya nayiphi na ingxelo okanye isilogeni sewebhusayithi enxulumene nomculo wesinyithi. Olunye uthotho lweziphumo ezibhaliweyo ezikhanyayo ezihamba ngokugqibeleleyo nezo zesinyithi ukuze zibanike ukukhanya okwaneleyo kwaye zibenze bagqame ngokugqibeleleyo.
Zizonke ezi ziphumo luluhlu olupheleleyo:
Iziphumo zentsimbi ezili-12: ipolishiwe, isantya, i-chroma, igolide, igrunge, isinyithi, amalahle, ubhedu, umnatha, imingxunya, umhlwa kunye nepeyinti.
Iziphumo zentsimbi ze-15 zentsimbi: isinyithi, isinyithi, i-chroma, umvumbo, umsantsa, umhlwa, imisesane, izinto ezilahliweyo, imigca, ipolishiwe, uphawu, mnyama, ukubulaleka kunye nomnatha.
I-12 ye-premium ye-3D: umlweli, imovie, amandla, idelta, okugqithileyo nokunye okuninzi kuthotho lomgangatho ophezulu.
Iziphumo zokukhanya ezili-12: umjelo, iblaze, ezemidlalo, isibali-xesha, indawo, ipleyiti kunye nehlabathi phakathi kwabanye ukunika loo mqondiso wokukhanyisa owenza ukuba igama okanye ibinzana likhanye.
Iziphumo zegolide ezi-3: Awunakuphulukana neziphumo ezibhaliweyo ezinxulumene negolide ukwenza ezo ngxelo zinxulumene nebhaso kwaye zibonakale ngathi azikho.
Iziphumo zesinyithi ze-18 HQ: ekhethekileyo kwiimpawu ezinje ngezoonxibelelwano zentlalo ukwahlula iwebhusayithi yethu okanye ikhadi lelo shishini lalowo mthengi ukhethekileyo.
Inxalenye yezi zinto zininzi bayavana ngokugqibeleleyo omnye nomnye kwaye kuya kufuneka sazi ukuba singazidibanisa njani ukuze sifumane yonke inqaku labo. Ngokukodwa ezi zikhanyayo ziya kulungeleka nakubani na, nangona ezi zikhanyayo ziya kulunga ngcono kunezo zihambelana nesinyithi esilahliweyo okanye umhlwa.
Kukho enye ipakethi yesinyithi, nangona ijolise kwenye indawo ngeethoni ezimnyama kwaye ingaqaqambanga kangako. Nokuba usebenzisa enye okanye enye iya kuxhomekeka kwiimfuno zakho, nangona bekutshiwo, zonke zikumgangatho obalaseleyo kunye nesisombululo esiphakamileyo. Nangona kufuneka kuthiwe le batch yendlela eyahlukileyo eyahlukileyo, ingaba sebenzela "ukunxiba" ii-icon zemidiya yoluntu ke bema ngaphandle kwezinye iiwebhusayithi.
Uhlobo lwevintage: xa indala isesefashini
Le pakethi ayinako nokusilela ukubamba iidiliya ukusisa kwezinye iindawo kuyilo nakwiziphumo zombhalo. Abazange bafune ukulibala ukusebenzisa ezi ziphumo zetekisi ukuguqula ezo zicatshulwa zineflethi zibe yinto efanelekileyo yibalisele kwiqela lasehlotyeniao ukubonisa iresiphi yabo beza ngeeperile xa kushushu.
Iimpawu zesitayile seediliya ngaphakathi kwephakheji yeziphumo zeFotohop zezi:
Izimbo ezingama-37 zizonke: Akukho sitayile seediliya eshiyekileyo kumbhobho, ke uya kuba nazo zonke izibonelelo ezoneleyo kuzo naziphi na iimfuno zomsebenzi.
Ukuhlelwa ngokupheleleyo: ungazihlela ngendlela othanda ngayo nokuba unike loo touch ikhethekileyo uyazi ukuba ungawukhulisa njani umsebenzi woyilo.
Isebenza ngayo nayiphi na ifonti kunye neemilo okanye iivenkile: iya kuba ngumcimbi wonqakrazo ukubonelela ngemibhalo ethe tyaba kunye naziphi na izimbo ezingama-37 zokuvuna onazo ngale phakheji yeziphumo.
Umgangatho ophezulu wePSD.
Kulula kakhulu ukuyisebenzisa: akukho nto inokuthethwa malunga noku njengoko ichaza ngokwakho. Unqakrazo olunye kunye nomlingo.
Kwaye sinazo ngeendlela zonke ezinokuhlala zinxulumene nelo gama "Vintage". Ukusukela la pinki kwi «pinky» apho iikona zinikwe inkululeko, efaka isicatshulwa nge-3D, nokuba "i-retro" apho ithoni ebluish ihamba kakuhle ngepinki.
Kukwakho nezinye i "grunge" ezifana ukuba sasikwintlango yasentshona kwaye zibonisiwe zezo ntlobo zoyilo zidinga intwana yento "yaseMelika". Kwaye ezi zitayile zingama-37 ziyakwazi ukuguqula nasiphi na isicatshulwa sentengiso okanye iflaya kwinto ehlaziya kakhulu, egcwele umbala kunye nobomi obuninzi. Isitayile seediliya esahlukileyo ngokuchaseneyo nezinye iziphumo zesicatshulwa esizibonileyo ukuza kuthi ga ngoku, ke ijika ipakethi ibe yinto egqibeleleyo engaswele nto; ngakumbi kwixabiso layo ukuba lehliswe ngama-90 epesenti.
Iziphumo ezivuthayo zombhalo: xa isicatshulwa sikhanya ngaphezulu kunabanye
Ezi ukukhanya kombhalo Sele sibazi kwaye singathetha kancinci ngabo. Zilungile kwaye zilula ukuzalisekisa umsebenzi wazo: ukubenza bajonge ngaphezulu kwelinye icandelo esiza kulidibanisa kwiwebhusayithi, intengiso okanye iflaya.
Lilonke sihlala kule ndawo inakho konke oku:
Ukukhanya kwesiphumo esikhethekileyo.
Kulula ukuyisebenzisa ngonqakrazo olunye.
Isebenza ngalo naluphi na uhlobo lwefonti.
Iziphumo zombhalo zeAdobe Photoshop: IVolcanic
Kwaye umlilo uthatha ezi zinto zibhaliweyo ukuze ukubetha ngokumangalisayo. Ukuba ubaluleke kangako, kuya kufuneka ukwazi ukuba ungazisebenzisa njani kwisibhengezo sentengiso esinento yokwenza nomlilo namalangatye. Kwaye olu luhlu lweziphumo zetekisi ezibhalwe ngqo zijolise kumxholo othile.
Xa zizonke kukho iziphumo ezi-8 zokubhaliweyo:
Lava: njengoko igama layo libonisa, udaka oluphuma kwintaba-mlilo ukunika lo mbhalo amandla endalo.
yimfumba: Ngethoni ember engakumbi, iinkwenkwezi ezimnyama kolu hlobo lwelava eyahluke kakuhle kwezinye.
imililo: okanye imililo, esi siphumo sombhalo siyathandwa ngumfanekiso otyhidiweyo apho amadangatye angqonge khona.
BurnIsiphumo sokubhaliweyo apho oonobumba babonakala ngathi bayanyamalala ngemizuzwana ngenxa yempembelelo yokutsha.
ichibi: okanye idike lomlilo, enye into ebangelwe yintaba-mlilo apho umagma uqukuqela ngokuthe chu ukuhla kwemilambo ye lava evela kwintaba-mlilo uqobo.
iziqina: i-magma ecekethekileyo ukuze abamnyama bathathe indawo enkulu koonobumba abenza igama elibhalwe ngophawu lwentaba-mlilo.
Ulibale: indawo apho umlilo ugqithe khona ukumisa isinyithi kwaye imelwe apha ngombala omhlophe ogcolisa inxenye yoshicilelo.
Ular: esinye isiphumo sombhalo wentaba-mlilo enobukho obukhulu kwaye obahlukileyo kwabanye ngokuba nesisombululo esithe kratya.
Ngamafutshane, Iziphumo ezisibhozo zombhalo wentaba-mlilo eziza kuba nendawo yazo kweminye imisebenzi ethile, kodwa siyakuhlala sinazo ezandleni zethu ukuphuma kwezi zicelo ezenziwa ngamanye amaxesha ngabathengi kwaye zisenza ukuba sigeze kancinci. Le pakethi yeziphumo zombhalo ineendidi ezininzi kwaye le batch iyayibonisa.
Ngawo onke la maqashiso kule Ipakethe yeziphumo zombhalo ziya kongeza umgangatho omkhulu kwaye ngexabiso elingaphezulu kokungenakuphikiswa: $ 19 ngesaphulelo sama-90%. Ke sithetha ngepakethi ukuba amaxabiso ayo aqhelekileyo ziidola ezili-176. Ukuba unearhente, ungaphoswa kukuqeshwa kunye nale pakethi yeziphumo zezinto ezahlukeneyo ezinje ngeediliya, isinyithi, intaba-mlilo, ukukhanya, ukukhanya okanye iinkuni phakathi kwabanye abaninzi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Isibonelelo esingenakuphikwa: Iifoto zombhalo weFotohop ngesaphulelo sama-90%
Uyikhetha njani ilaptop yoyilo lwegraphic